Taageerada xisaabaadyo badan oo ka socda Instagram ayaa hadda rasmi ah | Androidsis
Instagram waxay u fidisaa taageerada akoonno badan
Barnaamijyo iyo adeegyo badan, sida Twitter, waxaad ka heli kartaa ikhtiyaarka ah inaad beddesho koontadaada haddii aad rabto. Ikhtiyaar muhiim u ah isticmaaleyaal badan oo badanaa leh akoon Twitter ah oo shaqo ah iyo mid iyaga u gaar ah oo loogu talagalay asxaabtooda ama xiriiro ay la leeyihiin oo looga hadlayo mowduucyo kala duwan marka loo eego kuwa ka faallooda kara xirfaddooda, oo diiradda saaraya kordhinta adeegyadooda xiriir la leh dhammaan noocyada shirkadaha. Xisaab badan ayaa lagama maarmaan ah Maanta shabakadaha bulshada iyo in ka badan iyo in ka badanba waxay ku sii siqayaan sidii ay ugu soo bandhigi lahaayeen isticmaalaha aaladda moobilka ikhtiyaarka ah inuu midba midka kale uga beddelo. Haddii aan ka hadalno Maareeyayaasha Beesha, waa ikhtiyaar muhiim u ah shaqadooda maalinlaha ah si aysan ugu noqonin xulashooyinka kale ee lacag-bixinta.
Instagram ayaa ugu dambeyntii ku dartay taageero loogu talagalay koontooyin badan. Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo, barnaamijka sawir qaadista ee caanka ah wuxuu keenaa awoodda adeegsadayaasha in ay si fudud ugu beddelaan xisaabaadka kala duwan ee ay ku yeelan karaan qalabkooda Android. Muuqaal aad u xiiso badan oo tayo dheeraad ah ku daraya shabakaddan bulsheed oo noqotay mid ka mid ah isbeddellada xilligan ee malaayiin dad ah oo adduunka ku nool iyo in ka mid ah bulshada yar yar ay ka helaan adeegsadayaasha sida ugu badan u isticmaala maalin kasta. Waxaan wajaheynaa barnaamij sidoo kale loo isticmaalay in lagu kordhiyo caankiisa iyadoo kor loo qaadayo tayada kaamirooyinka, dhabarka iyo xagga horeba, oo hadda laga heli karo taleefannada gacanta oo aan qiimahoodu ka badneyn 150-200 € .
1 Ka beddel koontada barta 'Instagram'
2 Faahfaahinta kale ee cusub
Ka beddel koontada barta 'Instagram'
Isticmaalayaasha hadda way awoodi doonaan ku dar shan koonto oo kala duwan oo si fudud ugu kala beddela. Waa inaad tagtaa goobaha astaamaha si aad ugu darto koontada dheeriga ah, si tan loo sameeyo, u gudub dusha sare ee astaantaada si aad ugu bedesho xisaabaadka.
Markaad daalacatid bartaada 'Instagram' waad awoodi kartaa eeg sawirka muuqaalka ee muuqda meelo kala duwan iyada oo loo marayo codsiga si aad u ogaato waqti kasta koontada aad isticmaaleyso. Tani waa mid muhiim ah si looga fogaado in lagu soo bandhigo qoraallo ama sawirro koonto ah oo aan ahayn, mana noqonayso markii ugu horreysay ee ay u horseedo jahwareer iyo dhibaatooyin gaar ah oo aan la ogeyn koontada uu isticmaalayo.
Ogeysiisyada Instagram waxay u muuqan doontaa koontooyin badan waxayna ku xirnaan doontaa waqtiga ugu dambeeya ee aad soo gasho iyo tirada qalabka ku soo galay koontada. Maskaxda ku hay in ay dhici karto inaadan ka helin dhammaan ogeysiisyada riixista akoonno fara badan sida Instagram ay ku leedahay boggeeda rasmiga ah markii lagu dhawaaqayo warkan taageerada ah.
Faahfaahinta kale ee cusub
Haddii sabab kasta ha noqotee aad rabto inaad tirtirto koontada 'Instagram' ee lagu daray, waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad aadaa bogga, markaa u wareeji koontada oo guji dejinta geeska midig ee kore. Halkaas, waxaan hoos ugu foorari doonnaa illaa aan ka helno xulashada "fadhiga dhow". Maskaxda ku hay in haddii aad ka baxdo dhammaan xisaabaadka, dhammaan kuwa lagu daray waa la tirtiri doonaa.
Instagram ayaa tan tijaabinaysay muuqaalka ay dalbadeen kumanaan isticmaale ah muddo dheer Android, ilaa Nofeembarhalka dadka isticmaala iphone ay bilaabeen in ay ku arkaan taleefoonadooda usbuucii hore. Muuqaalkan cusub waxaa laga heli karaa nooca 7.15 labada Android iyo iOS. Dhaqdhaqaaq aad u xiiso badan oo ay sameysay Instagram, maxaa yeelay adeegsadayaal badan ayaa ku qasbanaaday inay ku rakibaan barnaamijyo dhinac saddexaad ah inay yeeshaan akoonno badan. Laga bilaabo maanta waxay u tagi karaan midka rasmiga ah oo ay iska iloobi karaan barnaamijyada dhinac saddexaad si ay ugu helaan koontadooda shaqo ama tan asxaabta ama qoyska halkaasoo qofku ku dareemayo raaxo badan inuu u diro dhammaan noocyada sawirrada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Instagram waxay u fidisaa taageerada akoonno badan
Hadda waxaad kala soo bixi kartaa sawirrada Samsung Galaxy S7
Hel 2GB oo ah kaydinta Google Drive ee bilaashka ah Maalinta Internetka Badbaadsan